ပုပ္ပါး တွင်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်…..(fotos) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ပုပ္ပါး တွင်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်…..(fotos)
- Yoko Ono Bono
Posted by Yoko Ono Bono on Feb 7, 2012 in Cultures, Home & Garden, Photography, Travel | 21 comments
Poppa Mountain Resort
About Yoko Ono Bono
Zak Beaver has written 1 post in this Website..
၁၀၀% မြန်မာစစ်စစ်.... တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကိုအလွန်ချစ်... သူတို့ ရဲ့ ရိုးသားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူသူအားလုံးအလွန်မုန်း....ကုလား တရုတ် မခွဲခြား ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေ မြန်မာ local တွေကိုဒီလိုလုပ်မှ ရတာ ဆိုတဲ့စကားကြားရဖန်များရင်တော့အလွန်ဒေါသထွက်တတ် သော...
View all posts by Yoko Ono Bono →
ပုပ္ပါးရဲ့ သာယာတဲ့ နေ၇ာလေးတွေဘဲနော်။ရိုက်ချက်ကတော့ ရှယ်ပါဘဲ။
နေ၇ာကောင်း၊ရိုက်ချက်ကောင်းလို့သဘောကျလွန်းလို့ 
လက်ရာ ကောင်းတချို့ ကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ်လို့
ဒေါ်စိန်ပေါက် အမျိုးနဲ့လည်း တွေ့ခဲ့သေးတာကိုး
အားပေးကြတာကျေးဇူးပါဗျာ…. စာတွေသိပ်မရေးလိုက်တာ မြန်မာဖောင့်သိပ်မကျွမ်းလို့ နော်…..ဒီဟာတောင်၁၅မိနစ်ရှိပြီ ရိုက်လိုက်မှားလိုက်နဲ့
ပုံ ၄ နဲ့ ၅ ကို အနှစ်သက်ဆုံးပါ။
တောလမ်းလေးနဲ့ တောအုပ်လေးက ကဗျာဆန်လိုက်တာ ။
အော်တို့ရွာထဲမှာလည်း တကယ့် ဓာတ်ပုံဝါသနာ အိုးတွေပါပဲလားနော်။ ကောင်းလိုက်တာ။ ပုံတွေ ယူသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
တုန်တုန်ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူး။ တုန်ရေ တုန့်ကို ဟန်းနီးမွန်းထွက်ခိုင်းတာ ဒီနေရာလေးလေ။
ပုပ္ပါးအလွမ်းပြေ မို့ ကျေးဇူးပါ။
မျောက်ကလေး က ချစ်စရာလေးဟယ်။
ရွာထဲ က ဟို သူငယ် /သူငယ်မ စိန်မျောက်မျောက် ကို တောင်သတိရမိသေးရဲ့။ ;-)
ကျနော် အံ့ဩနေကျစကားနဲ့ အံ့ဩပါရစေဗျာ။
အိုး ရွာ ဂေါ့ဒ်!!! (Oh Your God!!!
ဂေဇက်ကိုဝင်ပြီဆိုရင်တော့ ၁၅ မိနစ်လောက်ကတော့ဗျာ။
ဂေဇက်ရဲ့ မဲန်ဘာတွေဆို အိပ်ရေးပျက်၊ ပိုင်ရှင်သူကြီးဆိုမအိပ်လိုက်ရဘဲ အလုပ်တန်းသွားရတာတွေ
ဖြစ်ရတာဗျ။ ခင်ဗျားလဲ လာမှာပါ။ ဒီအဆင်နဲ့ ဒီအဆင် ဒီအတိုင်းဖြစ်လာမှာမို့ ဝဲ(လ)ကမ်းပါဗျာ။
ပျော်ရွှင်စွာ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းဖြင့် ဂေဇက်ကိုချစ်ခင်လာမှာပါ။
မျောက်ပုံလေးက nature ပေါ့နော့။ စီးကရက် ဗူးအစား ငှက်ပျောသီး ဆို အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပါပဲ။ ကြည့်ရတာ လူတွေ ရဲ့ စည်းကမ်း မရှိမှု ကို ဖော်ပြ ချင်တာလား မသိဘူး။ ဒါ့ပုံဆရာ ရဲ့ မုဖ် ကို မမှီမကန်း ဖမ်းကြည့်တာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ….ကျနော် စိတ်ထဲ ရှိနေတာလေးပေါ့…နောက်တစ်ခု မြန်မာပြည်မှာ tourist destination တော်တော်များများမှာတွေနေရတာ correction pen ရာတွေလေ…. အရမ်းကို ရုပ်ဆိုးပြီး နေရာရဲ့ အရသာပေါ့ သွားသလိုပဲ…..
စိန်ပေါက်ပေါက် က ဆေးလိပ်သောက်ပြီး စိန်မျောက်မျောက်က ဆေးလိပ်ဘူး နမ်းနေတာ ဖြစ်ရမယ်။ သူ့ချစ်ချစ် အနံများ ရမလားဆိုပြီးတော့..
မနောက်ပါနဲ့ကိုဆူးရယ်
အဲတာ ကျမသူငယ်ချင်း ပေဇာဂီပါ
အဲဒီကမျောက်တွေတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာ….ဘောင်းဘီအိပ်ထဲလဲ လိုက်နှိုက်တာ….အစာရှိတယ်မှတ်လို့:D…စကားမစပ် တောင် ပေါ်တက်တဲ့ လမ်းကြောင်းကိုကြွေပြားတွေမဟုတ်ရင်တော်တော်ကောင်းမှာ…လူကြီးတွေတစ်ဘိုင်းဘိုင်း နဲ့ လဲကြတာ မိုးလေးစပ်စပ်ဆို….အလယ်ပိုင်းရဲ့ အိုအေစစ် လို့ တောင်တင်စားရအောင်လဲ စိုစွတ်တာလေ ဒေသက….မိတ်ဆွေတို့ သွားရင်သတိထားရအောင်ပြောပြဦးမယ်…တွေ့ ကရာမထိုင်နဲ့ နော မျောက်လေးတွေကသူတို့ ကိုအပြန်လမ်းတောက်လျှောက်သတိရအောင်လဲလုပ်တတ်သေးသဗျ…ကျနော်တောင် သူတို့ အင်းအင်းပေါ်ထိုင်မိလာသေးတယ်…..
လက်ရာကောင်းတွေပါ……….အောက်ဆုံးက စိန်ပေါက်ပေါက် ပုံ အဲလေ စိန်မျောက်မျောက်လေးက ရွာထဲက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တူသလိုပဲဗျ…….. ကိုကြီးကမ်းလဲ မဟုတ်လောက်ဘူး………အဒူများပါလိမ့်…???????
Yoko Ono Bono ရေ ပုပ္ပါးကမျောက်တွေထက် မုံရွာဖိုးဝင်းတောင်က ပိုဆိုးပါတယ်။
ပုပ္ပါးရဲ့ သာယာတဲ့ နေရာလေးတွေပါ..
Ma Ei တို့ရိုက်ခဲ့တာ လူပုံတွေပါနေလို့..
Poppa Mountain Resort မှာ Co., တစ်ခုစီနဲ့ တစ်ရက်စီနေခဲ့ရတာ အမှတ်တရဘဲ..
Woodland Co., က Htoo Co., ကိုလွှဲပေးတဲ့အချိန်ရောက်သွားဖြစ်တာလေ..
ပထမ ရက်က Woodland ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်..ညရောက်တော့ မီးပျက်ပါလေရော..
ဒီဇယ်ကုန်နေလို့ တစ်နာရီလောက် ဖယောင်းတိုင်နဲ့နေရတယ်..
တကယ့် သဘာဝ အရသာအပြည့်ခံစားခွင့်ရခဲ့တယ်….
ှဟုတ်တယ်ဗျ…ကျနော်သဘောကျတာ ရီဆော့ ကတစ်ခုခုတော့ ပြန်ပေးလိုက်နိုင်တယ် သူကတော့ သဘာဝတောတောင် နက်နက်ရဲ့ အရသာကို နည်းနည်းရိပ်မိအောင်ခံစားရတယ်…ညဘက်ဆိုမိုးစက်ကျသံလေးတွေနဲ့ပုရစ်အော်သံတွေ…တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်….
တကယ် ရောက်ရှိသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ ခုလိုကျတော့လည်း တောင်တစ်ဝိုက်က စိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးတွေကြီးပဲနော်။ ထပ်ပြီးသွားချင်လိုက်တာ။
ပုံလေးတွေက ကောင်းသဗျို့ … ။ ပုပ္ပါးဆိုတဲ့ စကားနဲ့အညီ မျောက်ကလေးလည်း ပါလာတော့ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဗျာ ။
ပို့စ်တွေလည်း ထပ်ပြီး တင်ပါဦးလို့ …… ။
အခုလိုကြိုဆိုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…ညဘက်ဆိုတစ်ယောက်ထဲ အိမ်မှာဆိုတော့ ဒီဂေးဇက်ကိုပဲတစ်နာရီတစ်ခါလောက်စောင့်ပြီးဘယ်သူတွေဘာတင်ပြီလဲ ဆိုပြီးကြည့်ရတာအမော…ဒီဆိုက်က member တွေက အားလုံးလဲအရမ်းရင်းနှီးပြီး တစ်မျိုးလေးပဲ…အခြား မှာလုံးဝဒီလိုမတွေ့ ဘူးသေးဘူး…နောက်လဲကြုံရင်ကြုံသလို ဗဟုသုလဲဖြစ် အကျိုးလဲရှိစေတဲ့ ပို့ စ် တွေတင်ခွင့်ပြုကြပါနော်….
ရူ့ခင်းလေးတွေကိုမြင်ရတာ စိတ်ထဲချမ်းမြေ့သွားတယ်၊ ပုပ္ပားတောင်ကို အဝေးကလှမ်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံ (၈၊ ၁၁၊ ၁၂) ပုံလေးတွေကို သဘောကျတယ်၊ မျှဝေပေးလို့ကျေးဇူးပါ..